INingizimu Afrika - Izifundazwe zaseNingizimu Afrika, INingi
Ezombusazwe aseNingizimu Afrika
Izihlahla zaseNingizimu Afrika
Imfundo yaseNingizimu Afrika
Omasipala baseNingizimu Afrika
Umculo eNingizimu Afrika
Umnotho weNingizimu Afrika
ⓘ INingizimu Afrika - Izifundazwe zaseNingizimu Afrika, INingizimu Sudan, Khayelitsha, Gugulethu, Izilimi zaseNingizimu Afrika, Skukuza ..
Abantu baseNingizimu Afrika Amadolobha eRiphabliki yaseNingizimu Afrika Amaholide aseNingizimu Afrika Amalungelo abantu eNingizimu Afrika Amaqembu ezombusazwe aseNingizimu Afrika Ezombusazwe aseNingizimu Afrika Izifundazwe zaseNingizimu Afrika Izihlahla zaseNingizimu Afrika Imfundo yaseNingizimu Afrika Izilimi zaseNingizimu Afrika Omasipala baseNingizimu Afrika Umculo eNingizimu Afrika Umlando waseNingizimu Afrika Umnotho weNingizimu Afrika
iNingizimu Afrika line zilimi eziyishumi nanye ngamandla esikhundla. Zingu: isiXhosa isiZulu isiVenda isiTswana isiNdebele isiSuthu sasenyakatho isiPedi isiNgisi isiTsonga isiSwazi isiBhunu isiSuthu IsiZulu sikhulunywa kakhulu impela 24% bakabantu baseNingizimu Afrika bakhuluma isiZulu ekhaya. Ulimi olulandelayo luyi siXhosa 18% bese isiBhunu 13%. Njengoba kunezilimi ezihlukene kunendlela elula esetshenziswayo eNingizimu Afrika ukuqinisekisa ukuthi abantu bonke bathola umyalezo ofanayo kokubhaliwe kumbe okukhulunywayo. Ukuhumusha nokutolika yizona zindlela ezisetshenziswayo ukwenza lokho. ...
I-Inhlangano_yebhola_yaseNingizimu_Afrika noma iSafa yiyona nhlangano kazwelonke yebhola eNingizimu Afrika. I-SAFA yasungulwa ngo-1991. I-South African Football Association iyona eyesibili yebhola le-Football Association eNingizimu Afrika ezobizwa ngokuthi iNingizimu Afrika Yenhlangano Yebhola YaseNingizimu Afrika futhi iyinhlangano yesibili yebhola e-South Africa ukuze ihlanganyele neFIFA. Usuku lwamanje iSouth African Football Association, ngokungafani nalokho okushiwo ngaphambili livumela ithimba likazwelonke elihlangene. I-SAFA idluliselwe kuFIFA ngo-1992 kanti iqembu layo eliphakeme l ...
Skukuza iyona main restcamp eKruger National Park. Igama, zithathelwe ezihlokweni ezithi Zulu elithi "Sikhukhuza" kwaba lesilwane uJakobe Stevenson-Hamilton. Lokhu kusho ukuthi umshanelo omusha, njengoba ndawo Stevenson-Hamilton wesula kusuka abazingeli abangekho emthethweni bathola nezinye izigebengu. Ikamu yasungulwa ngo-1902, futhi yokuqala eyaziwayo njengoba Sabie Bridge lize lethiwe Skukuza ngo-1936.